German ngwaahịa mgbanwe weere launching Bitcoin ngwaahịa
German Boerse, nwe nke Frankfurt Stock Exchange, na-enyocha ihe àjà cryptocurrency ngwaahịa, dị ka otu akụkọ.
Na-ekwu okwu na ụlọ ọrụ omume na London on Wednesday, Jeffrey Tessler, ike isi nke ndị ahịa, ngwaahịa na isi ahịa kwuru:
“Anyị bụ ndị miri emi na-arụ ọrụ na ya.”
US busoro nchoputa nke iwu na-akwadoghị Bitcoin price mkpachapụ
The Justice Department meghere ihe nchoputa n'ime rụrụ arụ trading, kpọmkwem ma na-azụ ahịa na-criminally emeghari na price nke Bitcoin, dị ka mmadụ anọ maara na okwu.
Federal prosecutors na-arụ ọrụ na Commodity Futures Trading Commission, a ego regulator Itieutom nkwekọrịta kegide Bitcoin.
The rụrụ arụ si eme na Justice Department na-elekwasị anya na-agụnye spoofing na asacha trading, nke iwu na-akwadoghị omume pụrụ imetụta ahịa. na spoofing, a ahia na-edo iwu na mgbe na-akagbu ha otu ugboro ahịa ịga na a chọrọ direction.
Saa trades abuana a aghọ aghụghọ ule trading na ha onwe-enye a ụgha echiche nke ahịa ina na lures ọzọ na amaba na kwa.
Ndị a bụ ụdị nke na-n'ịghọ aghụghọ ule na regulators nọrọ afọ na-agbalị iwepụ futures na equities ahịa.
Thai akụ enwezu mba azụmahịa iji blockchain
Thailand si Krungsri akụ ọma mụụrụ a cross-ókè-ala azụmahịa “na a okwu nke sekọnd” na ụlọ akụ dị na Singapore eji a blockchain.
Iji a technology na-eme n'ọdịnihu ga-ekwe ka Singapore akụ, Mitsubishi, na presumably ụlọ ọrụ ndị ọzọ na “n'ihu mma ya liquidity management arụmọrụ na belata ha na-eri” akụ kwuru.
First kaadị oke ego oru na Australia
Australia si Kwa Capital ka ulo oru na mba mbụ cryptocurrency-okowụk oke ego maka retail investors.
Tom Surman, ngalaba-nchoputa na director nke Australia dabeere ego management ụlọ ọrụ, kwuru:
“Anyị na-mpako na-otu n'ime ndị mbụ retail ego na-eme ka cryptocurrency na blockchain technology dị ka a ọnwụ onu ego maka ọ bụla Australian. "
Dị ka Surman, mgbe ọtụtụ ndị Australia na-achọ itinye ego na cryptocurrencies, enweghị oru etu esi na-egbochi ọtụtụ n'ime ha si na mmiri n'ime digital ego mmiri.
Japanese tech ibu GMO tụgharịa 7nm Bitcoin egwuputa
Japanese IT ibu GMO Internet atọrọ tụgharịa a Bitcoin Ngwuputa ngwaọrụ dabeere 7nm ibe mechara nke afọ a.
The ike kwuru na ọ na-launching ọhụrụ B2 egwuputa on June 6 na uka mmepụta ka anya na-eso, na butekwara malite na October.
Ndị mara ọkwa na kwuru na ngwaọrụ ga-enye elu-etoju nke hashing ike na ala ọkụ eletrik choro.
Coinbase enweta kaadị mgbanwe Paradex & ezube na-enye ọrụ na-abụghị US
Coinbase, ndị kasị ibu kaadị mgbanwe n'elu ikpo okwu na US, nwere enwetara decentralized mgbanwe ikpo okwu Paradex.
Paradex bụ onye ọgbọ na-ọgbọ ọrụ na-enye ọrụ na-ike na-ahia cryptos kpọmkwem site ha wallets kama iji centralized ọrụ dị ka Coinbase, Gemini, etc. N'ihi ya, ọrụ nwere zuru custodial ikike n'elu ha tokens na fiat isi obodo.
Coinbase ezube ime ka ụfọdụ nkwalite na technology na ẹkedori Paradex ọrụ ahịa mpụga nke United States.
Akara ererimbot Czech ike ụlọ ọrụ na-anabata Bitcoin ịkwụ ụgwọ
Otu n'ime ndị kasị ibu eke gas ụlọ ọrụ dị na Czech Republic, Prague gas, ka a mara ọkwa na atụmatụ na-anabata Bitcoin ọzọ ọnwa.
The ike ụlọ ọrụ bụ naanị ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na-dị otú ahụ a nzọụkwụ.
Ugbu a, Prague Gas eletrik onunu More karịa 420,000 ahịa na gas.
bitcoinngọngọ yinyeCoinbasekaadịmgbanweegwuputaNgwuputaozin'elu ikpo okwu